अख्तियारमा मिल्यो भागबण्डा ! यी हुन् आयुक्त र प्रमुख आयुक्त बन्ने उमेदवार ? - Sagarmatha Online News Portal
अख्तियारमा मिल्यो भागबण्डा ! यी हुन् आयुक्त र प्रमुख आयुक्त बन्ने उमेदवार ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार बालुवाटारमा छलफल भएको छ ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने र त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको समेत प्रतिनिधित्व हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग परामर्श गरेका हुन् । हाल अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त रहेका नविनकुमार घिमिरे आगामी भदौ २९ गते उमेर हदका कारण पदमुक्त हुँदैछन् । २०१२ भदौ २९ गते जन्मिएका घिमिरे ६५ वर्षे उमेर हदका कारण पदमुक्त हुन लागेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २३८ उपधारा (४) (ख) अनुसार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको ‘उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा’ पद रिक्त हुन्छ ।
हालको संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा २३८ (१) अनुसार अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र अन्य ४ जना आयुक्त रहनुपर्छ । तर घिमिरे, जोशी र गुरुङ मात्रै अख्तियारमा छन् । २ आयुक्त पहिल्यैदेखि रिक्त रहेको अवस्थामा प्रमुख आयुक्त घिमिरे यसै महिना पदमुक्त हुँदैछन् । आगामी चैत २९ गते जोशी र गुरुङ समेत ६ वर्षे पदावधिका कारण पदमुक्त हुनेछन् । यसबीच अख्तियारमा ५ पद खाली हुने भएकाले भागबण्डा सुरु भएको छ ।
प्रमुख आयुक्त प्रतिपक्षी दललाई नदिइने भएपछि ओली–प्रचण्डबीच सहमति भएको छ । पूर्व माओवादीको कोटाबाट आयुक्त बनेका जोशीलाई अध्यक्ष प्रचण्डको इच्छा अनुसार चैतसम्म प्रमुख आयुक्त बनाउने गरी दुवै नेताबीच सहमति जुटेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ६ वर्षे पदावधिका कारण जोशी चैत २९ गते पदमुक्त हुने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका प्रेमकुमार राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने सहमति समेत जुटेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको पदावधि आयुक्त हुँदाको समेत गणना हुने भएकाले जोशी चैतमा पदमुक्त हुनेछन् । जोशीले साढे ६ महिना अख्तियारको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । जोशी अख्तियारमा वरिष्ठतम आयुक्त समेत हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेमकुमार राईलाई तत्कालै प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहेपनि पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्न प्रचण्डलाई समेत खुशी पार्नुपर्ने भएकाले ६ महिनाका लागि जोशीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन बालुवाटार राजी भएको हो । राई हाल आयुक्त नियुक्त हुनेछन् भने जोशी पदमुक्त भएपछि प्रमुख आयुक्त बन्नेछन् । पूर्व गृहसचिव राई केपी ओलीको खास मान्छे भएको भनेर धेरै प्रचार भएको र तत्कालै सिधै प्रमुख आयुक्त बनाउँदा सार्वजनिक विवाद र आलोचना समेत हुनसक्ने भएकाले आयुक्त बनाएर अख्तियारमा प्रवेश गराएपछि प्रमुख आयुक्त बनाउने रणनीति बालुवाटारले तय गरेको छ ।
प्रचण्डको कोटाबाट जोशी प्रमुख आयुक्त र ओलीको कोटाबाट राई आयुक्त बनेसँगै देउवाको कोटाबाट समेत एक जना आयुक्त बन्नेछन् । देउवाले आफ्नो कोटाबाट आयुक्तका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख दिलिप रेग्मी वा पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्दको नाम अगाडि सारेका छन् । रेग्मी २०७५ पुसमा विभागबाट पदमुक्त भएका थिए भने चन्द प्रहरी प्रमुख आईजीपी हुने विवादमा फस्दै पदमुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले चन्दलाई नरुचाउने भएका कारण देउवाको कोटाबाट आयुक्तमा रेग्मीको सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।